ကျန်းမာချင်ရင် ဆန်လုံးညိုစားပါ !!!!! - JAPO Japanese News
ဂါ 12 May 2020, 9:27 မနက်
ပူပူနွေးနွေးလေး ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ထမင်းပူပူလေးဟာ အရမ်းကိုအရသာရှိတယ်နော်။
ကျွန်တော်လည်းအရမ်းကြိုက်လို့ ခေါက်ဆွဲ၊ ပေါင်မုန့် တို့ထက် ထမင်းကိုပဲ ရွေးမှာပါ။
ဒီလိုပုံမျိုးမြင်လိုက်ရင်တော့ မြင်တာနဲ့ ဗိုက်ဆာလာရောပဲ။
သို့ပေမယ့် ဒီထမင်းဖြူကို ဘာလို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မကောင်းဘူးလို့ ပြောရသလဲဆိုတာ သိကြပါသလား?
ခေတ်သစ်ဆေးပညာရှင်တို့ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ ဒီကိစ္စဟာ သိရှိပြီးသားသူတွေ အတော်များများရှိပါတယ်။
သကြားကန့်သတ်ထားတဲ့အစားအစာ (သို့မဟုတ်) ကာဗွန်ဓာတ်နည်းတဲ့ အစားအစာတွေကို သင် ကြားဖူးပါသလား?
သကြားဓာတ်မြင့်မားပြီး ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်မြင့်မားတဲ့အစားအသောက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချပေးတဲ့ အစားအစာတွေပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒါက နည်းနည်းမှားနေတယ်။အဆိုပါ ပြဿနာကတော့ အဖြူရောင် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာပြထားတဲ့ ဆန်လိုပဲ ဆန်ဖြူကို အမြဲစားလေ့ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ဂျုံမှုန့်။
ဒီ အဖြူရောင် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေဟာ သွေးရဲ့ သကြားဓာတ်ကို မြင့်တက်စေပြီး လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးအမောဖောက်ခြင်း အစရှိတဲ့ သွေးလွှတ်ကြော နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါတွေကို ဖြစ်စေဖို့ အားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။
အထူးသဖြင့် ဂျပန်ရဲ့ ဆန်တွေဟာ ကဆီဓာတ်ပိုများပြီး ဝဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ဒီကဆီဓာတ်တွေကို ပယ်ထုတ်ပြီး စားမယ်ဆိုရင် ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေလည်း တော်တော်လေး များလာပေမယ့် ဒါဟာလည်း မှားယွင်းနေတဲ့ အယူအဆ ပါ။
ဒီလိုသာ ကဆီဓာတ်တွေကို ပယ်ပြီးစားနေမယ်ဆိုရင်လည်း အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ပိုပြီးမြန်ဆန်စေပါတယ်။
ကဲ ဒါဆိုရင် ကျန်းမာနေရုံသာမက နုပျိုနေစေရန် ဘာလုပ်သင့်လဲ ?
ဒီလိုဆိုရင်တော့ အညိုရောင် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် ကိုစားပေးရင် ရပါပြီနော် !
ရိတ်သိမ်းဆန်မှ စပါးခွံလို့ခေါ်တဲ့ ပြင်ပအရေပြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကဲ့သို့ ဖယ်ရှားပြီးတော့ ရလာတဲ့
ဆန်ဖြူ. . .သူ့မှာ အာဟာရဓာတ်များစွာပါဝင်ပါတယ်။
ဒါဟာအဝလွန်ခြင်းနှင့် arteriosclerosis ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးတဲ့ အစားအစာအဖြစ် လူသိများတဲ့ ဆန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အားကောင်းသော antioxidant အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ Vitamin E သည်ဆန်ဖြူတွင်မပါ ၀ င်ပါ။
ထို့အပြင် အညိုရောင်ဆန်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်သင့်လျော်တဲ့ ဖောလစ်အက်စစ်များစွာပါရှိပါတယ်။သတ္တုဓာတ်အပါအဝင် မရှင်းပြနိုင်လောက်အောင် ကောင်းတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လို့ စူပါအစားအစာဟုခေါ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုခေါ်ရလောက်တဲ့ သက်သေအထောက်အထားအချို့ရှိပုံရပါတယ်။အရင်တုန်းက လူတွေဟာ အညိုရောင်ဆန်ကို စားခဲ့ကြပေမယ့် ဘာလို့ ဒီလို ကျန်းမာစေတဲ့ အစားအစာကို လွှင့်ပစ်ပြီး လက်ဝင်တဲ့ အချိန်ကြာကြာပြုလုပ်ရတဲ့ ဆန်အဖြူကိုမှ ပြောင်းလဲပြီး စားလာကြလဲ?
ဒါကတော့ စားပုံစားနည်းရယ် အရသာပိုရှိလို့ ရယ်ကြောင့် ဒီလို ပြောင်းလဲစားသုံးလာတဲ့ အကြောင်းရင်း ဖြစ်တယ်လို ဆိုကြပါတယ်။
ဆန်ဖြူက ပျော့ပြောင်းပြီး ညင်သာတဲ့ အရသာကို ရရှိစေပါတယ်။ဒါပေမယ့် နေ့တိုင်းစားနေရတဲ့ အရာက ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့ အရာကို ပိုရွေးသင့်တာပေါ့နော် ?
ဒါကြောင့်စူပါအစားအစာ လို့ ခေါ်တဲ့ အရသာရှိရှိ အညိုရောင်ဆန်ကို ဘယ်လိုချက်ရမလဲ
ပထမ ဦး စွာ ဆန်စပါးအညိုရွေးချယ်နည်း ကိုပြောပြမယ်နော်
သဘာဝအတိုင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးမသုံးထားတာကိုရွေးချယ်ပါ။ခန္ဓာကိုယ်အတွက် တကယ်ကောင်းတဲ့အရာကို လိုချင်ရင်တော့
ပိုးသတ်ဆေးများ ပြည့်နှက်နေတဲ့ဆန်သာဆို သင်ဘာမျှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ပိုးသတ်ဆေးတွေကိုဆေးကြောလို့မရပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက ဆန်ကို မချက်ခင် ပြင်ဆင်မှုပါ။ဆန်ကိုဆေးပြီးတဲ့နောက် ၁၀မိနစ်ခန့် သန့်ရှင်းသောရေတွင် စိမ်ထားပါ။
နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ ဒီလိုစိမ်ပေးထားလို့ ဆန်က နူးညံ့လာပြီး၊ ပျော့ပျောင်းစေရန်ရေကိုစုပ်ယူထားနိုင်လို့ပါ။ဆန်က ရေကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အများဆုံးစွမ်းအားကို အသုံးပြုသောအချိန်ဖြစ်မှာ ရေထပ်ထည့်ပြီး ထမင်းပေါင်းအိုးထဲထည့်လို့ရပါပြီ။
အစာခြေနိုင်ဖို့က ဆန်ဖြူလောက်တော့ မကောင်းဘူးလို့ပြောထားတဲ့အတွက် သေသေချာချာ ကျေးဇူးပြုပြီး ဝါးပြီး စားပါ။ဒါကလည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းမွန်သောအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သင်သေသေချာချာဝါးရတဲ့ အခါ တံတွေးထွက်လာမယ်။
ဒါကလည်း သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်။ပိုကောင်းသောအစာခြေခြင်းက သင့်ကိုပိုမိုကျန်းမာစေပါတယ်။ခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်း အဖြူရောင်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် ကို ရှောင်ပြီး
အညိုရောင် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါတဲ့ ဆန်ကို ရွေးသင့်တယ်ဆိုတာ
ဂျုံမှုန့်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Ramen ခေါက်ဆွဲထက် အညိုရောင် Soba ခေါက်ဆွဲက ပိုကောင်းပြီး၊
Udon မဟုတ်ပဲ buckwheat ကိုစားတာက ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုကောင်းပါတယ်။
ကျန်းမာစေတဲ့ အစားအစာတွေကို စားပြီး ပိုပြီးကျမ်းမာအောင်လုပ်နေကြစို့နော် !
အရုပ်တွေနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ခွဲခွာကြတယ်